Eagle reviewed John Dee3years ago
Excellent restaurant, offeringawide variety of American dishes, such as Steaks, Ribs, Salads, Pizzas, Burgers, Pasta. The taste is fantastic, and the prices are very reasonable.
Livin_khai reviewed Swensen's3years ago
Giant ice-cream with delicious taste. I'm so full.
Livin_khai reviewed Shwe Pu Zun (Lanmadaw Branch)3years ago
ggg reviewed Escape Gastro Bar3years ago
food is not bsd..but the fries wereabit soggy. atmosphere very laid back...
Zēyāŕ Htóó reviewed Thai Kitchen (Dagon Branch)3years ago
Great Thai Taste except Price
Zēyāŕ Htóó reviewed Chatime (Mayangone Branch)3years ago
Best drink ever except price
foodie reviewed Thai Pot I3years ago
It was one of the worst dining experiences!! I got there at about 6.30 but almost all of the food trays are empty, even sauce :3 The waiters were not helpful and they didn't even budge an inch. The food never got refilled and the customer service is terrible.
Kyaw Soe Oo reviewed Shabushi3years ago
Htoo Zaw Aung reviewed Cafe3years ago
I had to wait for 30mins to get an ice-cream. =.=
စွာတေးလန် reviewed Oishii (Bahan Branch)3years ago
Aye Myat Moe Moe reviewed M Cake House3years ago
They bake rainbow cake with your favorable design
Sky reviewed Santino3years ago
နေယာ ထိုင်ခင်း အခင်းအကျင်းလေးတွေ ကောင်းပါတယ်။ စားစရာတွေ လဲစုံတယ်..ဈေးနှံတွေလဲ အသင့်တင့် ပါပဲ။ အဆင့်ရှိနေရာ တစ်ခုဖြစ်ပြီး.. အေးဆေးနေလိုသူတွေ အတွက် ဂွတ်ရှယ် တစ်နေရာပါ ။
Frankie Tun reviewed Wasabi Japanese restaurant3years ago
Khant Zin reviewed Epic Bar3years ago
အရသာ​ရော၊ အပြင်​အဆင်ေ​ရာ၊ Service ပါ အားလုံး​ကောင်းပါတယ်​။ ​ဈေးလဲသင့်​တင့်​ပါတယ်​။
Chit Htut reviewed Thai Pot II3years ago
Alexis reviewed BBQ Chicken (Junction Square Branch)3years ago
ဆိုင်အပြင်အဆင်နဲ့ နေရာကတော့ကောင်းပါတယ်။ sky view လိုမျိုး လုပ်ပေးထားတာလည်းကောင်းပါတယ်။စားရင်းသောက်ရင်းနဲ့ ရှုခင်းကြည့်လို့ရတာပေါ့။ ကျွန်တော်အဲ့နေ့က ထိုင်တာက kitchen နဲ့နီးလို့လားမသိဘူး ချက်နေရင် အညှော် နံ့တွေ ဆိုင်ထဲပြန်ဝင်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ french fries မှာစားတော့ french fries လေးတွေက အရမ်းသေးပါတယ်။ တချို့ဟာဆိုရင် လက်ဆစ်1ဆစ်စာလောက်ပဲရှိတယ်။ အဲ့နေ့ကမှာတာက ထမင်းနဲ့ကြက်ကြော်နဲ့ ထမင်းက Olive oil နဲ့ပြန်ကြော်ထားတာပါ။ အရသာကတော့ အရမ်းလည်းမဆိုး အရမ်းလည်း မကောင်း ပုံမှန်ပါပဲ။ မှာထားရင် စောင့်ရတာ နည်းနည်းတော့ ကြာပါတယ်။ ကျန်တာကတော့ ပုံမှန်ပါပဲ။
Mary Pan reviewed Chatime (Sanchaung Branch)3years ago